CCAA : 70%-n’ny olona mpifoka mahalany sigara 10 isan’andro | NewsMada
CCAA : 70%-n’ny olona mpifoka mahalany sigara 10 isan’andro
Antony faharoa hanatonan’ny olona ny Centre de cure Aro Aina ny fialana amin’ny sigara, araka ny vaovao nampitain’ny mpiandraikitra ny foibe. 32% ny tahan’izy ireo tonga ao Andravoahangy ka ny 62%, vehivavy ka 15 taona no nifoka sigara voalohany izy ireo amin’ny ankapobeny. Ho an’ny 70%, mifoka sigara 10 isan’andro izy ireo, ny sasany mahalany iray fonosana mihitsy. Rehefa mifoka sigara telo na efatra isan’andro ny olona iray, ambara fa efa miankin-doha tanteraka. Ho an’ny paraky, ny olona any ambanivohitra no voasariky ny paraky. Areti-nify no iantombohan’ny fihinanana azy ka lasa fahazarana tanteraka rehefa mandeha ny fotoana.
Tao anatin’ny 10 taona niasan’ny CCAA, 2 460 ny olona tonga. Antony anatonan’ny olona ny foibe ny filana torohevitra sy fomba ialana amin’ny toaka, manaraka ny sigara, fahatelo ny rongony ary ny fahefatra ny olona mihinana cocaïne (2%). Ho an’ity karazany farany ity miampy ny heroïne sy morphine, mijaly ara-pahasalamana amin’ny fotoana tsy ahafahany mihinana na mievoka azy ireo efa miankin-doha. 100.000 Ar ny vidin’ny fatra iray. Amin’ny ankapobeny, ireo olona manana fari-piainana ambony kokoa no misafidy ny rongony telo karazana. 40%-n’ny olona tonga manatona te hiala avokoa.
Ety am-piandohana, ny manodidina sy ny fianakaviana no tonga maka torohevitra amin’ny mpiandraikitra ny foibe. Rehefa resy lahatra tanteraka ilay olona vao miditra amin’ny fanalana amin’ny fiankinan-doha amin’ny zava-mahadomelina samihafa. Efa-bolana ka hatramin’ny herintaona ny fandraisana an-tanana sy ny fanaraha-maso ny olona iray vonona hiala iray.
Kitra – Major League Soccer (MLS): tsara fanombohana ny ekipan’i Romain Metanire 15/07/2020
Indray mijery 15/07/2020
Bakalorea: hifarana ny 17 jolay ny fisoratana anarana 15/07/2020